Qormooyin toddobaadle ah oo lafaguraya duruufaha nololeed iyo xaaladaha taagan /Qalinkii, Maxamed Saleebaan Cumar | Saxil News Network
Qormooyin toddobaadle ah oo lafaguraya duruufaha nololeed iyo xaaladaha taagan /Qalinkii, Maxamed Saleebaan Cumar
Waa xilli adag. Waa abaar dadqalato ah iyo sebaan la adhax jabay.
Abaaro baahay, daba-dheeraaday, jiitamay, oo hawaarsaday. Cirku wuu engagan yahay, dhulkuna waa arradan yahay. Xoola-dhaqatadii gabbal baas ayaa u dumay. Duunyadii si xawli ah ayay u le’anaysaa; tarab-tarab ayay u le’anaysaa. Xoolo macne leh oo maanta deegaannadaa lagu sheegi karaa ma jiraan. Meelo badan oo ka mid ah mandaqadda geeska ayay aafada abaartu isku fidisay. Gobollada bari ee Somaliland ayay si gaar ah u taabatay. Runtii aad baa looga dayrinayaa xaalka deegaannadaas, si ay noqon doonta na mooyi.
XAALADDII UGU XUMAYD:
Rabbow gamashi baan taagannee, roobka nagu guud fur
W/Q/Maxammad Saleebaan Cumar